०५ भदौ, काठमाडौं । टुसा स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक छ । टुसा उमारेको कुनै पनि खाद्यवस्तुलाई जीवन्त खानेकुरा भनिन्छ । महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पहिचान बोकेको क्वाँटी जनैपूर्णिमा पर्वको विशेष आहारका रूपमा रहँदै आएको छ । परम्परागत रूपमा यसले जाडो आउन सुरु गरेको सन्देश पनि दिन्छ । जाडोका वेला टुसा उमारेको खानेकुराले …
तिर्थराज ज्ञवाली, ०३ भदौ , सिसहनिया(देउखुरी) । राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडामा स्वास्थ्य ईकाइ सुरु भएका छन् । बुधबार ३ वटा वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य भवनको उद्घाटनसंगै दक्ष स्वास्थकर्मी सहित सेवा सुरु गरिएको हो । राप्ती गाउँपालिकाले सबै वडामा स्वास्थ्य ईकाइ स्थापना गर्ने लक्ष्य सहित काम सुरु गरेको ३ वर्ष भित्रै …
२ भदौ, काठमाडौं । हाम्रो कलेजो हाम्रो शरीरका लागि निकै महत्वपूर्ण अंग हो । त्यसैले यसको स्वास्थ्यबारे हामी निकै सचेत हुनुपर्छ । कलेजोमा समस्या हुँदा यस्ता लक्षणहरु देखिए कलेजोबारे समयमा नै सचेत हुनुपर्छः चिलाइरहने छाला हाम्रो छाला अत्यधिक चिलायो भने हामीले बुझ्नु पर्छ, कलेजोमा समस्या भएको हुनसक्छ । किनकि हाम्रो …
पुग्दो निद्रा आफैमा औषधि हो । यसले धेरै किसिमको रोगको जोखिमबाट मुक्त राख्छ । तर, पुग्दो निद्रा भनेको के हो ? कति अवधि हो ? उमेर अनुसार सुत्ने अवधि र त्यसका खास फाइदा छन् । राम्रो निद्राको फाइदाको बारेमा धेरै तिर हामीले पढ्न र त्यसलाई महसुस पनि गर्न सक्छौं । …
तुलसीपुर, २९ साउन । लगातारको अविरल बर्षाले गर्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ बेलगनार निवासी रामु थारुको घर भत्किएको छ । रातभरि परेको अविरल बर्षादले शुक्रबार विहान ५ बजेतिर घर भत्किएको हो । विहान भएको र सबै घर बाहिर रहेकाले मानवीय क्षति भने भएन । तर, घर भित्र रहेको सम्पूर्ण …
विहानै नरिवल पानी पिउँदा हुन्छन् यी फाइदा
२८ साउन,काठमाडौं। नरिवल पानीमा विषाक्त तत्वलाई हटाउने गुण हुन्छ । जसलाई पिउनका लागि शरीरको उर्जा मिल्छ जसमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ । जसले रोकप्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । यदी तपाई बढिरहेको वजनका कारण चिन्तित हुनुन्छ भने तपाईलाई निकै फाइदा पुग्छ । विशेषज्ञका अनुसार विहानको समयमा नरिवल पानी पिउनु सवैभन्दा धेरै …
२६ साउन, काठमाडौं । दिनभर उर्जावान बन्नको लागि बिहान खाजा खानु आवश्यक छ । खाजामा पोषणले भरिएको खाद्यपदार्थ पनि खानुपर्छ । तर कैयौ पटक जानकारीको अभावमा मान्छे खाजामा गलत खानेकुराको सेवन गर्ने गर्छन् । जसको कारणले पाचनसँग जोडिएको समस्य वा अन्य बिमारीहरु समेत हुन सक्छ । के खानुपर्छ बिहानको खाजामा …
२४ साउन, काठमाडौं । कोरोना महामारीको कारण निरन्तर अनलाइन कक्षामा बस्दा बालबालिकाहरुको आँखा कमजोर हुँदै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक जर्नलले हालै प्रकाशन गरेको शोधकाअनुसार अनलाइन कक्षाको लागि बालबालिका विद्युतीय उपकरणहरुमा घण्टौं बस्नुपर्ने भएकाले उनीहरुको आँखामा असर पर्नुका साथै उनीहरुको दृष्टीशक्ति पनि कमजोर हुँदै गएको …
२२ साउन, काठमाडौं । खाना खाइसकेपछि मलत्याग पनि सही रुपमा हुनुपर्छ । नियमित दिसा–पिसाब हुनु पनि स्वास्थ्य जीवनको सूचक हो । तर, कतिपयलाई मलत्यागमा समस्या हुने गर्छ । नियमित रुपमा खाना खाइरहेको भएता पनि दिसामा कठिनाई हुन्छ । उनीलाई लामो समयसम्म शौचालय बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि पेट सफा हुँदैन । …
२१ साउन, काठमाडौं । अहिले धेरैको निद्रा सोसल मिडिया, टेलिभिजनका कारण विथोलेको छ । राती ओछ्यानमा पुगेपछि कोही फेसबुक चलाउन थाल्छन् त कोही युट्युबमा भिडियो हेर्न थाल्छन् । रातभर यस्तै काममा तल्लिन भएपछि विहान चाडै उठ्न सम्भव भएन । त्यही कारण विहान अबेरसम्म सुत्ने गर्छन् । यस्तो बानीले धेरैको दैनिकी …
123 … 80 अर्को पृष्ठ »